Highway - Movie Review [ Feri Arko Boring Movie ] | Lovenepal.net - Welcome To Your World !
Home » Movie Reviews & Nepali Movie » Highway – Movie Review [ Feri Arko Boring Movie ]	Do you Use CRBT & PRBT from Lovenepal ?
Highway – Movie Review [ Feri Arko Boring Movie ]
बीचमा त्यसभित्रका यात्रुहरुले हाइवेमा हुने बन्द भोग्छन्। त्यसमा बन्दको दुःख पीडा फिल गराउनु पर्ने हो। बन्दविरोधी फिल्मका रुपमा समेत यसलाई प्रचार गरिएको थियो। तर नेपालको परिवेश नबुझ्नेहरुले त बन्द के हो, यसले कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने नै बुझ्दैनन् यो हेरेर। बन्दका कारण हुने तनाव र यात्रुहरुले भोग्नुपर्ने पीडा, संवेदना यसमा रत्तिभर पनि देखिँदैन। बन्दको दुःख यसले अडियन्सलाई ‘फिल’ नै गराउन सकेको छैन।
बर्लिन फिल्म फेस्टिभलको पानोरमा सेक्सन भनेको एक किसिमको आरक्षण खालको सेक्सन हो। यसमासन् ८० को दशकदेखि तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीका फिल्महरु प्राथमिकतामा पर्छन्। हाइवेमा पनि तेस्रोलिङ्गीको कथालाई नकारात्मक रुपमा हैन, सकारात्मक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ। फिल्मका अनेकौँ कथामध्ये यो कथा पनि एक प्रमुख कथा हो।
[यो ब्लग साह्रै लामो भएकोले 'यसकारण बुझिएन हाइवे'भन्दै फिल्मका नबुझिने कथा खोतलिएको अर्को ब्लग पछि बेग्लै राख्नेछु]
Add to favorites यो गीत कस्तो छ ? मात्र तपाईहरु Comment गर्दै जानुहोस, हामी नयाँ नयाँ गीत Upload गर्दै जानेछौं ! कमेन्ट गर्नुहोस LeaveaReply
*DVD* Loot (2012) Nepali Movie Trailer - 104,736 views	Latest News